Barbaarinta ubadka Q.3aad - W/Q: Sumaya
Sideen u barbaarinnaa ubadkeenna? Q.3aad W/Q: Sumaya
Carruurtu waxa ay leeyihiin xuquuq fara badan laga soo billaabo guurka labada waalid, carruurtu waxa ay xaq u leeyihiin in loo dooro hooyo fiican hooyaduna doorato aabbaha carruurteeda ayadoo mar walba asaasku yahay
diin iyo akhlaaq.
Xaqa caruurtu waxa uu ka billaabanayaa marka uu dhasho canuggu ilaa uu gaaro heerka guurka.
1-AADAAN: waxaa aabbaha laga rabaa marka uu dhasho cunuggiisu in uu uga addimo dhegta midig tan bidixna uga aqimo .
2-XANAKIN: in cunugga loo xanakiyo oo timir loo burburiyey afka loo marmariyo.
3-MAGAC: in cunugga loo bixiyo magac wanaagsan oo islaami ah magacyadana waxaa ugu fiican kuwa cubuudiyada muujinaya iyo xamdinta alle .
4-WANQAL: in cunugga loo wan-qalo maalinka toddobaad ee dhalashadiisa kaddibna loo xiiro.
5-CAAFIMAADKIISA: xaqa uu cunuggu leeyahay waxaa ka mid ah in la dhowro sixadiisa .
6-DIKRIGA ILAAHAY: in cunugga mar walba hortiisa lagu xuso allaaah.
7-SHAHAADADA: in cunugga la baro shahaadataynka oo hadlkiisa ugu horreeya ee uu ku dhawaaqayaa noqdo labada shahaado.
8-LABADA SANO KADIB: cunuggu marka uu gaaro labo sano waa in ay labada waalid isku dayaan in ay xifdisiiiyaan qaar ka mid ah suwarka qur'aanka kuwooda fudfudud ee gaagaaban .
9-QISASKA: sida aan wada ogsoonnahayba waxaa ilmaha looga sheekeeyaa sheekooyin iyo qisas, sidaas darteed waxaa laga rabaa labada waalid qisaska iyo sheekada looga sheekeynayo carruurta in ay noqoto qiso mufiid ah oo uu cunuggu ka kororsanayo cilmi iyo thaqaafo sida qisaska anbiyada iyo saxaabada .
10-TVGA: waxa aan shaki ku jirin in aaladaha elektaroonigga sida TV-ga, Raadiyowga, Computer-ka iwm, in ay qarribaad badan ka wadaan guryaha, sidaas darteed waxaa labada waalid laga rabaa in ay guryahooda kala digtoonaadaa aaladahaas.
11-SALAADDA: Waalidku waa in uu cunugga ku ababiyaa salaadda in uu baro marka hore kaddibna ku koontaroolo .
12- MADARASADA: Waalidka waxaa laga rabaa in uu doorto madarasada carruurtiisa oo waa in uu ka fiirsadaa halka uu ilmihiisa cilmiga kaga raadinayo.
13-MURAAQABO: Waalidku waa in uu muraaqabeeyaa ama ka warqabaa afcaasha ubadkiisa .
14-IXTIRAAM: Cunuggu waa in la baraa in uu ixtiraamo labada waalid, ehelka, deriska, dadka ka waaweyn, martidana si gaar ah u soo dhaweeyaa.
15-QIRAA'ADA: In cunugga la jeclaysiiyo aqrinta sida labada waalid in ay hortiisa wax ku aqriyaan ugana sheekeeyaan waxa ay aqriyeen .
16- IN AAD LASAAXIIBTO CUNUGAADA: Waalidku waa in uu la saaxiibaa ubadkiisa si uu uga war qabo.
17-SAXIIBKA CUNUGGAADA : waa in uu waalidku ogaadaa oo uu bartaa saxiibka cunuggiisa kana dhawraa saxiibka xun.
18- DABACSANAAN: Waa in aad u dabacsanaataa cunuggaag si uu kuugu kalsoonaado, meelaha qaarna u indha guduudiso.
19-IN AAD LA CAYAARTO UBADKA.
20-INAAD BARTO MUJTAMACA IN UU LA MACAAMILOODO.
21-IN AAN LAHABAARIN UBADKA : waalidku waa in uu mar walba u duceeyaa ubadkiisa kana ilaaliyaa habaarka.
23- CADDAALAD: in uu waalidku u caddaalad sameeyo dhammaan carruurtiisa.
24-IN UU BARO SIDA AY IYAGU ISULA TACAAMULI LAHAAYEEN.
25-AMMAANADA: in ilmaha la baro in ay xifdiyaan ammaanada.
24-SADDAQADA: Marmarka qaar waa in uu waalidku u dhiibaa carruurtiisa saddaqada uu bixinayo si uu cunuggu u barto saddaqada .
25-UBADKA WAA IN LA BARAA ADAABTA: waa in aan barnaa ubadkeenna adaabta cunnada, la tacaamulka khalqiga dad iyo xayawaan.
Ilaahay ha waa fajiyo waalidiinta tarbiyada saxda ah ubadkana allaha ka yeelo saalixiin.
W/D: Sumaya Xaaji C/Raxmaan.